Pilot kuhlanganiswe isibani emgwaqweni
Imininingwane ye-Pioneer Enesibindi Yonke-in-one Solar Light 1. Umkhiqizo Uhlolojikelele Lo mkhiqizo wethu onelungelo lobunikazi, owenzelwe ukunikeza abasebenzisi isibani sasemgwaqweni se-high photovoltaic yelanga, futhi sesidlulile i-CE, UL kanye nezitifiketi eziningi zomhlaba. “Ukuxhumeka mahhala, kulula ukufaka”, ukusebenza kahle kokushaja kwe-Hhigh ”,“ ukukhuthazela okuqinile ”kanye“ nokusebenza kahle kokukhanya ”izinzuzo eziphambili zalo mkhiqizo. Umthamo omkhulu webhethri ye-lithium wakhelwe emzimbeni wesibani, ...
Ukucaciswa kweTransformer Solar Light (Monitoring version)
1. Ukubuka konke komkhiqizo Lo ngumkhiqizo wethu onelungelo lobunikazi, owenzelwe ukuhlinzeka abasebenzisi bethu ngezinsizakalo zokukhanyisa ezihlanganisiwe nezokuphepha. Sesidlulise izitifiketi eziningi zomhlaba ezifana ne-CE ne-UL. Izinzuzo eziyinhloko zomkhiqizo wethu zifaka: Umzimba wesibani une ...
Ikhamera yelanga ye-VS-Q5 enohlelo lwe-alamu
Ukusekela ovundlile mpo ezimbili-ikhanda ukushintshanisa,
I-engeli yokuqapha ingalungiswa kude,
Kuze kufike ku-355 ° ngokuvundlile naku-120 ° ngokuqondile,
Bona ukuqapha oku-omnidirectional.
With ezingaphezu kweyodwa, ukonga futhi ezingokoqobo.
I-SWL-16 (MARS 3) ukukhanya kwelanga elanga kabusha elangeni
I-ALS Technology Guaranteed 10 Night Continuous Working NightsTCS Technology Iqinisekisa Ukuphila Isikhathi Eside SebhethriGcina iphaneli lelanga libhekene nokukhanya kwelanga ukukhanya kwelanga ngqo ukuqinisekisa ukuthi kungashaja ngaphakathi i-Li-ion batteri ngempumelelo.